China imaski ezilahlwayo ezingavukiwe zezokwelapha ifektri kanye nabaphakeli | Zhongxing
Ukusetshenziswa okulahlwayo kwamamaski wezokwelapha angalukiwe anezici ezincane zokumelana nomoya, nokungcolisa ngomlomo nangamakhala okukhishwe noma okukhiphayo neminye imisebenzi yokudlulisa; inikezwe ngendlela ye-aseptic. ukumelana nomoya ngaphansi kuka-49 Pa, ukusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane okungaphezu kuka-95.
Lo mkhiqizo ulungele ukugqokwa ngabasebenzi bezokwelapha basemtholampilo noma izisebenzi ezihlobene endaweni ejwayelekile yezokwelapha.
Umkhiqizo ungasetshenziswa ezikhungweni zezokwelapha, amalebhu, ama-ambulensi, emakhaya nakwezinye izindawo.
Amaphakeji ayi-100 amasiki ezokwelapha angalukiwe asetshenziswe kanye
Amaski wokuhlinzwa wezokwelapha anezici ezilandelayo:
1. Isendlalelo sangaphandle somzimba womaski indwangu engeyona enobuthi engeyona eyelukiweyo eyenziwe nge-polypropylene;
2. Isendlalelo sangaphakathi semaski senziwe ngezinto ze-polypropylene engeyona enobuthi, okuyindwangu enkulu engalukiwe ene-pro-husband air permeability;
3. Isici sesihlungi semaski senziwe ngendwangu engacwengeki e-ultra-fine encibilikisiwe ephethwe ugesi omile, futhi ukusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane kungaphezu kwama-95%;
4. Imaski yomzimba wepulasitiki ekhaleni lenqubo yokugqoka ukulungiswa okufanele, ukugqoka ngokunethezeka nangokunethezeka;
5. Ukumelana nokuphefumula kungaphansi kuka-49 Pa, ngesikhathi sokugqoka;
6. Lo mkhiqizo usebenzisa ubuchwepheshe obungenamthungo bokucindezela ubuchwepheshe kanye ne-ultrasonic welding technology ukwenza imaski ithambe, iqine futhi ibe yinhle.
Ukusetshenziswa okulahlwayo kwezimaski zezokwelapha ezingalukiwe kusetshenziswa kakhulu ezikhungweni zezokwelapha, emalabhorethri, kuma-ambulensi, emindenini, ezindaweni zomphakathi nakwezinye izindawo zokugqoka, kungamboza umlomo womuntu, ikhala kanye nokugunyazwa, kuvimbele ukungcola okuphuma ngomlomo nangamakhala okukhishwe noma okukhiphayo nokunye imiphumela. Izindlela eziyinhloko zokusetshenziswa yilezi:
1. Vula iphakheji bese ususa imaski ukubheka ukuthi imaski isesimweni esihle yini.
2. Isifihla-buso sinezinhlangothi zombili ezimhlophe nezimnyama, uhlangothi olumhlophe lubheke ngaphakathi, isiqeshana sempumulo phezulu, zombili izandla zisekela ibhande lekhava yokuvula, gwema ukuthintana ngesandla nengaphakathi lesifihla-buso, uhlangothi olungaphansi lwesifihla-buso empandeni yesilevu, ibhande lendlebe kwesobunxele nakwesokudla ibhande lokunwebeka elenga endlebeni;
3. Usebenzisa i-plasticity yesifihla-buso sekhala, cindezela ngomunwe, yenza isiqeshana sempumulo sinamathisele phezulu kwesigxobo sekhala, ulolonge isiqeshana sempumulo ngokwendlela yesigxobo sekhala, bese uhambisa umunwe wenkomba ezinhlangothini zombili kancane kancane, ukuze imaski yonke isondele esikhunjeni sobuso.
Igama Ledivayisi Yezokwelapha Imaski yezokwelapha engalahlwanga
Imodeli Isayizi enkulu / emaphakathi / encane
Imininingwane 180 mm × 100mm / 170mmmm × 90 mm / 160mm × 80mm
Igama IChibi Lesipuni
Izinto Polypropylene nonwoven
Ukusebenza kokuhlunga kwamagciwane ≥95 amaphesenti
Izinsalela ze-ethylene oxide ≤5μg
Inombolo yokuthobela I-YY / T 0969-2013
Imininingwane yokupakisha Ukupakisha isikhwama sepulasitiki, 1 isikhwama ngasinye
Isicelo Isetshenziselwa ukuvimbela ukukhishwa komlomo nangomlomo noma ukukhishwa kokungcola nokunye ukuvikelwa kokudluliswa, dlala indima yokuvikela izindlela ezimbili
Isixuku esisebenzayo abasebenzi bezokwelapha, abasebenza ngamakhaza abandayo nabagijimayo, abasebenza ezindaweni zomphakathi, njll
Ukubhalisa No. ISu Ordnance Inothi 20172641053
Langaphambilini Imaski yokuvikela yezokwelapha
Olandelayo: Isifihla-buso sesihlungi esizimele
Inzalo Ukotini Swab, Imaski ephefumula, Ukotini Wezokwelapha, Alahlwayo Medical Face Imaski, Imaski Yama-antiviral, Isihlengikazi Pad,